Fanabeazana :: Sekoly tsy miankina no nahazo ny « Rallye Matematika” sokajy D • AoRaha
Fanabeazana Sekoly tsy miankina no nahazo ny « Rallye Matematika” sokajy D
Nifarana ny 22 mey lasa teo ny fifaninanana “Rallye Matematika”. Ho an’ny sokajy D, izay nahitana ireo Taona fahairaika ambin’ny folo sy kilasy famaranana siantifika dia ny avy ao amin’ny sekoly tsy miankina Saint-Joseph Antsirabe no nandrombaka ny fifanina­nana.
Efatra ireo solontenan’ity sekoly ity nanatanteraka izany adina famaranana izany. Nisongadina, hoy ny mpikarakara, ny fahaizan’ireo ankizy tamin’ity taona ity satria niakatra hatrany izany. Nahatsapa izany ihany koa ireo mpianatra nandresy
avy amin’ny sokajy D tamin’ ny fifaninanana. “Sarotra ny fifaninanana. Mahay avokoa ireo mpifaninana sady voa­laza fa efa mpandray anjara amin’ny “Rallye Matematika” izy ireo fa tamin’ny sokajy hafa”, hoy i Eric.
Marihina fa andiany fahavalo ambin’ny folo ity hetsika notanterahina ity. Tanjon’ny mpikarakara ny hampiakatra ny fahaizan’
ny mpianatra ny taranja Matematika sy ny mba hitiavan’izy ireo azy, ka mba hisafidianany io taranja io, aorian’ny Bakalorea.
Niakatra ny tahan’ny mpandray anjara tamin’ny andiany faha-18 ity raha ny fanazavana avy amin’ny mpandray anjara hatrany. Marihina fa sekoly maro avy amin’ny faritra sivy no nandray anjara tamin’izany. Sokajy efatra no nifaninana nanomboka amin’ny Taona fahenina hatramin’ny kilasy famaranana.
Akon’ny Pantekoty :: Somary nangingina ny fankalazana fety tamin’ny faran’ny herinandro
Androm-bavaka maneran-tany :: Nitondra am-bavaka ny firenena ireo mpino kristianina